कस्तो होला सुशिल र बर्षाको ‘कारखाना’ ? « Ramailo छ
कस्तो होला सुशिल र बर्षाको ‘कारखाना’ ?
‘होस्टेल रिटन्र्स’ डेव्यु नायक सुशिल श्रेष्ठ र ‘नाईं नभन्नू ल २’ डेव्यु नायिका बर्षा सिवाकोटीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘कारखाना’ असार १६ गते शुक्रबार देखि अल नेपाल रिलिज भएको छ । हिट सिक्वेलबाट नेपाली फिल्ममा आफ्नो यात्रा सुरु गरेका सुशिल र बर्षाको फल्मले कस्तो व्यापार र प्रतिक्रिया पाउँला त ?
प्रदर्शनको हिसाबले ‘होस्टेल रिटन्र्स’ पछि सुशिल अभिनित ‘कारखाना’ दोश्रो र बर्षाको पाँचौं फिल्म हो । बर्षा र सुशिलले पहिलो पटक एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेका हुन् । फिल्म कारखानाको मायाले बोलेको बोली मिठो भो बोलको गीतलाई रुचाइएको छ । अमरदिप सापकोटा निर्देशित फिल्म चाहिं कस्तो होला त ? उसो त सुटिङपछि कारखानको सम्पादन कार्यमा दुई निर्मातहरु सुदिप खड्का र अमर बज्रर्चाले बसेका थिए । बर्षा र सुशिलसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
लभ स्टोरी फिल्म ‘कारखाना’ मा सुशिल र बर्षासँगै अभिनेत्री मौसमी मल्ल, नविन लम्साल, जेविका कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा भाडामा बच्चा जन्माउने आमाको कथा पनि उठाइएको छ ।